စလော့ အေကြာင်းတစေ့တစောင်း - Myanmar Online Game
စလော့ ကိုဘယ်လိုဆော့ရလဲ မဆွေးနွှေးခင် မေးသင့်တဲ့မေးခွန်းတစ်ခုက “Slot ဆိုတာဘာလဲ?”
Slot စက် (Slot Machine) လို့လူသိများတဲ့ ကစားနည်းရဲ့ အစပိုင်း Standard ပုံစံက Line “1” လိုင်းနဲ့ Wheel “3” ခုပါဝင်ပြီး သစ်သီးပုံတွေနဲ့အစပြုခဲ့လို့ Fruit Machine လို့ခေါ်ခဲ့ကြတာပေါ့။ အကြွေစိကိုအသုံးပြုပြီးတော့ မောင်းတံဆွဲချလိုက်မယ်ဆိုရင် Wheel တွေကလည်ပတ်နေမှာဖြစ်ပြီးတော့ ရပ်သွားတဲ့အချိန်မှာ လိုင်းပေါ်မှာကျန်ခဲ့တဲ့ Symbol လေးတွေရဲ့ကိုက်ညီမှုအပေါ်မှုတည်ပြီး အကြွေစိပြန်အနိုင်ရတာဖြစ်ပါတယ်။
Symbol တွေရဲ့ကိုက်ညီမှုကလဲ ကိုယ်ကစားနေတဲ့စက်အပေါ်မှုတည်ပြီးကွဲပြားနိုင်ပေမယ့် စက်တိုင်းရဲ့ အပေါ် (သို့) ဘေးနားမှာ “Payout” ပြန်ရနှုန်းတွေကိုအသေးစိတ်ပြထားလေ့ရှိပါတယ်။ Classic Slot စက် တွေမှာတော့ မောင်းတံနဲ့ဆွဲပြီးဆော့ကစားရသလိုပဲ အချို့စက်တွေမှာ ခလုပ်ဖိနှိပ်ပြီးကစားရတယ်။ ဒီစက် ၂မျိုးနဲ့ပတ်သက်ပြီး အချို့ Player တွေက မောင်းတံကိုဆွဲရတဲ့ ခံစားချက်ကိုကြိုက်ကြသလို အချို့ကကြတော့လဲ လွယ်လွယ်ကူကူပဲခလုပ်နှိပ်ပြီးကစားရတဲ့ ခံစားမှုကိုကြိုက်ကြလို့ Casino တွေမှာ အမျိုးအစားစုံအောင်စက်တွေကို ချပေးထားတာတွေ့ရမှာပါ။
Slot ကစားနည်းဟာ အရမ်းကိုအောင်မြင်ပြီးလူကြိုက်များတဲ့ကစားဖြစ်တာကြောင့် လူမျိုးကွဲများတဲ့ မတူတဲ့နိုင်ငံတွေမှာလဲ Slot ကို ခေါ်တဲ့အသုံးအနှုန်းကကွဲကြပါသေးတယ်။
British အနေနဲ့ဆိုရင် “Fruit Machine”, Scottish English အနေနဲ့ဆို Puggy, Australian English အနေနဲ့ဆို “Poker machine/ Pokies”, မြန်မာဘာသာနဲ့ဆို “စလော့” ဆိုပြီးအမျိုးမျိုးခေါ်ကြပါတယ်။
ကမ္ဘာ့ပထမဆုံး Slot Machine “Liberty Bell”
ဘာလို့ Slot ဆော့သင့်တာလဲ? Slot ကစားသင့်တဲ့အချက်တွေကများတယ်… အဲ့ထဲကအသိသာဆုံးအချက်တွေကိုပြောရမယ်ဆိုရင်
အခြား Casino ကစားနည်းတွေလို ရှုပ်ထွေးပြီး အငြင်းအခုန်ဖြစ်နိုင်စရာ အခြေအနေတွေမရှိဘူး။သင်္ချာအမြန်တွက်တက်ဖို့မလို၊ အာရုံများစရာမလိုပဲနဲ့ အရမ်းကိုရိုးရှင်းတဲ့ကစားနည်းတစ်ခုမို့ပါ။Payout rate တွေကိုလဲအလွတ်မှတ်ထားစရာမလိုပဲ စက်တိုင်းမှာလွယ်လွယ်ကူကူပဲပြထားတာမို့ထည့်ချင်သလောက် Betting (လောင်းကြေး) ထည့်ပြီးတော့ လှည့်လိုက်တာနဲ့ လည်နေတဲ့ Slot Wheel တွေရဲ့ မီးရောင်စုံကြားမှာ စိတ်လှုပ်ရှားမှုကို အပြည့်အ၀ခံစားနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်! (2) တစ်ယောက်ထဲအေးအေးဆေးဆေးကစားနိုင်တယ်Casino တစ်ခုထဲခြေလှမ်းလိုက်ပြီးဆိုတာနဲ့ ကစားနည်းအားလုံးအလိုလို အခြားကစားသူများနဲ့ယှဉ်ပြီး (သို့) အတူတူကစားရတဲ့ကစားနည်းတွေများတာ တွေ့ကြမှာပါ.. ဒါပေမယ့် Slot ကစားနည်းကတော့ ကစားသူအရေအတွက်လိုအပ်ချက်မရှိပဲ တစ်ယောက်ထဲ အေးအေးဆေးဆေးထိုင်ပြီး အကြွေစိတွေအပြုံလိုက်ကျလာတဲ့အသံကို မြိန်မြိန်ကြီးခံစားနိုင်ပါတယ်!
Casino တစ်ခုထဲခြေလှမ်းလိုက်ပြီးဆိုတာနဲ့ ကစားနည်းအားလုံးအလိုလို အခြားကစားသူများနဲ့ယှဉ်ပြီး (သို့) အတူတူကစားရတဲ့ကစားနည်းတွေများတာ တွေ့ကြမှာပါ.. ဒါပေမယ့် Slot ကစားနည်းကတော့ ကစားသူအရေအတွက်လိုအပ်ချက်မရှိပဲ တစ်ယောက်ထဲ အေးအေးဆေးဆေးထိုင်ပြီး အကြွေစိတွေအပြုံလိုက်ကျလာတဲ့အသံကို မြိန်မြိန်ကြီးခံစားနိုင်ပါတယ်!
Las Vegas မှ Slot Machine တစ်တွဲ
အခုခေတ် Slot game တစ်ခုကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင် Payline တွေများစွာ Pay Table အမျိုးအစားများစွာနဲ့ game တွေကိုတွေ့ရတဲ့အခါ တော်တော်များများက ကစားဖို့အတွက်ရှိန်ပြီး လက်တွန့်သွားတက်ကြပါတယ်။ တကယ်တမ်း အခြေခံ Rule တွေကိုနားလည်ထားရင် ဘယ်လို Theme ပဲပြောင်းပြောင်း ဘယ်လောက် Payline များများ အတူတူပဲမို့ ယုံကြည့်မှုရှိရှိနဲ့ Slot ကစားနေတဲ့ ကိုယ့်ကိုအပေါင်းအသင်းသူငယ်ချင်းတွေ၊ မြင်သူတွေက အထင်ကြီးတာခံရမှာပါ
အခြားကစားနည်းတွေလို အသည်းအသန်ကစားရတာမဟုတ်ပဲနဲ့ လည်နေတဲ့ Wheel တွေမှာကျလာမယ့် Symbol တွေကိုအာရုံတစိုက်နဲ့ စောင့်ကြည့်နေရတဲ့အတွက် စိတ်တည်ငြိမ်စေပါတယ်။ ပြီးတော့ Slot ကိုကြိုက်နှစ်သက်လို့ပုံမှန်ကစားသူတွေကို အတွေးအခေါ်ကောင်းသူတွေလို့ သတ်မှတ်ကြတယ်။
ကျွန်တော်သိပ်ပြီးအိပ်လေ့မရှိဘူး၊ အမြဲသွက်လက်နေတယ်၊ စိတ်ကဖျက်လက်နေတယ်၊ ဇနီးသည်ကတောင် ကျွန်တော့စိတ်က Slot Machine တစ်ခုကလည်နေတဲ့ Wheel တွေလိုပဲတဲ့။ ဆိုတော့၊ ဟုတ်တယ်။ ကျွန်တော်အရာအားလုံးအကြောင်းတွေးတယ်
“Wheel of Fortune” Game Show ကိုအခြေခံပြီးဖန်တီးထားတဲ့ Slot Machine
အခုခေတ်မှာ Slot ကိုဆော့ကြသေးလို့လား?
Survey အချက်အလက်တွေအရ American Casino တစ်ခုရဲ့ပျှမ်းပျဝင်ငွေ ၇၀% ဟာ Slot ကစားနည်းကဖြစ်ပါတယ်။ ယခုခေတ်မှာဆိုရင် Slot Machine တွေကို Casino အထိသွားပြီးဆူညံတဲ့အသံတွေကြားမှာ မကစားပဲ ကိုယ့်ရဲ့ Mobile ဖုန်း/ Computer တို့ကနေတဆင့် Online ကစားလို့ရနေပြီမို့ အရမ်းကိုအဆင်ပြေပါတယ်။ မြင်နေကြ Fruit, ဖဲချပ် ပုံစံမျိုး Classic Theme တွေပဲမဟုတ်ပဲ အခုခေတ်နဲ့အညီ Adventure, Fun, Mystery, Fantasy, Movie,…etc. အစရှိတဲ့ Theme မျိုးစုံနဲ့အမြင်ဆန်းသစ်ပြီး ကိုယ်ကစားနေတဲ့ Theme နဲ့အညီ ထူးခြားတဲ့ PayTable တွေကြောင့် ကစားရတာအရင်ကထက်ကို ပိုပြီးပျော်စရာအရမ်းကောင်နေပါပြီ။
အပေါ်မှာပြောခဲ့သလိုပဲ Slot ကိုကစားရတာအရမ်းကိုလွယ်ကူနေပါပြီ။ လိုအပ်တာက Mobile (သို့မဟုတ်) Computer တစ်လုံးနဲ့ Internet ရှိရုံပဲဆိုတော့
ဒီ Link လေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ Slot ဂိမ်းပေါင်းများစွာကို ဆော့ကစားပြီး အေးအေးဆေးဆေးနဲ့ပဲ အမြတ် တိုးပွားနိုင်မှာပါ။
မဆော့ဖူးလို့ စိမ်းနေသေးတဲ့အတွက် မဆော့ရဲသေးဘူးဆိုရင်လဲ “အစမ်းဆော့ရန်” ကိုနှိပ်ပြီး Free ပေးတဲ့ Coin တွေနဲ့ အစမ်းဆော့ကြည့်လို့လဲရသေးတယ်နော်…
Theme မတူတဲ့ Slot ကစားနည်းများစွာထဲက ကြိုက်နှစ်သက်တဲ့တစ်ခုကိုဝင်ပြီး အရမ်းကိုပေါ့ပါးမြန်ဆန်တဲ့ Slot တွေကို ခံစားလို့ရပါပြီ!
Sport Betting ကသင့်အတွက်လား? - Myanmar Online Game
[…] Slot Game အကြောင်းတစေ့တစောင်း […]